ኢያሱ 21 NASV – Yosua 21 ASCB | Biblica
ኢያሱ 21 NASV – Yosua 21 ASCB
Nkuro A Wɔde Maa Lewifoɔ
1Afei, Lewifoɔ abusua mu ntuanofoɔ kɔɔ ɔsɔfoɔ Eleasa ne Nun babarima Yosua ne Israel mmusuakuo a aka mu ntuanofoɔ nkyɛn. 2Wɔka kyerɛɛ wɔn wɔ Silo a ɛwɔ Kanaan asase sɛ, “Awurade hyɛɛ Mose sɛ, ɔmma yɛn nkuro na yɛntena mu ne adidibea mma yɛn anantwie.”
3Na sɛdeɛ Awurade hyɛeɛ no, wɔde nkuro a ɛdidi soɔ yi a wɔn adidibea ka ho maa Lewifoɔ sɛ wɔn agyapadeɛ.
4Aaron asefoɔ a na wɔyɛ Kohat abusua mma, na wɔfra Lewi abusuakuo mu no nyaa nkurotoɔ dumiɛnsa a na anka ɛyɛ Yuda, Simeon ne Benyamin mmusuakuo no dea.
5Afie a aka wɔ Kohat abusua mu no, wɔmaa wɔn nkurotoɔ edu firii Efraim ne Dan mmusuakuo no ne Manase abusuakuo fa no nsase mu.
6Gerson abusua no nso, wɔmaa wɔn nkurotoɔ dumiɛnsa firii Isakar, Aser, Naftali ne Manase abusuakuo fa no wɔ Basan.
7Merari abusua no nyaa nkurotoɔ dumienu firii Ruben, Gad ne Sebulon mmusuakuo no nkyɛn.
8Enti, Israelfoɔ no dii Awurade ɔhyɛ nsɛm a ɔde maa Mose no so. Wɔbɔɔ ntonto kronkron, nam so yiyii saa nkuro yi ne adidibea a ɛkeka ho maa Lewifoɔ.
9Israelfoɔ no de saa nkuro a ɛyɛ Yuda ne Simeon mmusuakuo no dea no 10maa Aaron asefoɔ a wɔfra Kohat abusua mu na ɛka Lewi abusuakuo ho no, ɛfiri sɛ, ntonto kronkron a ɛdi ɛkan no bɔɔ wɔn.
11Kiriat-Arba a (wɔfrɛ no Hebron), a ɛwɔ Yuda bepɔ asase so ne ɛho adidibea. (Arba yɛ Anak tete agya.) 12Nanso, nsase ne nkuraaseɛ a atwa kuro no ho ahyia no deɛ, wɔde maa Yefune babarima Kaleb. 13Nkuro a ɛdidi soɔ yi ne wɔn adidibea no, wɔde maa ɔsɔfoɔ Aaron asefoɔ: Hebron, (dwanekɔbea Kuropɔn), Libna, 14Yatir, Estemoa, 15Holon, Debir, 16Ain, Yuta ne Bet-Semes a ɛyɛ nkurotoɔ nkron a wɔnya firii saa mmusuakuo mmienu yi nkyɛn.
17Wɔfiri Benyamin abusuakuo mu de saa nkuro yi ne adidibea a atwa ho ahyia no maa asɔfoɔ:
Gibeon, Geba, 18Anatot, Almon—a ɛyɛ nkurotoɔ ɛnan.
19Enti, nkurotoɔ dumiɛnsa na wɔde maa asɔfoɔ a wɔyɛ Aaron asefoɔ no.
20Kohat21.20 Kohatfoɔ—Na saa nnipa yi nyɛ asɔfoɔ, ɛfiri sɛ, na wɔnyɛ Aaron asefoɔ. abusua nkaeɛfoɔ a wɔfiri Lewi abusuakuo mu no nso, wɔde saa nkuro yi ne adidibea a ɛfiri Efraim abusua nkyɛn maa wɔn:
21Sekem, (dwanekɔbea kuropɔn), Geser. 22Kibsaim ne Bet-Horon, a ɛyɛ nkurotoɔ ɛnan.
23Saa nkuro ne adidibea yi nso, wɔde maa asɔfoɔ a wɔfiri Dan abusuakuo mu:
Elteke ne Gibeton, 24Ayalon ne Gat-Rimon, ɛyɛ nkurotoɔ ɛnan.
25Manase abusuakuo fa no de saa nkuro ne wɔn adidibea maa asɔfoɔ no:
Taanak ne Gat-Rimon, ɛyɛ nkurotoɔ mmienu.
26Enti, nkuro edu ne wɔn adidibea na wɔde maa Kohat abusua nkaeɛ no.
27Gerson abusua a wɔyɛ Lewi abusuakuo no fa bi no nso, wɔnyaa nkuro mmienu ne wɔn adidibea
firii Manase abusua fa no nkyɛn.
Nkuro no ne Golan a ɛwɔ Basan (dwanekɔbea kuropɔn) ne Beestra.
28Isakar abusuakuo no nso maa wɔn:
Kision, Daberat, 29Yarmut ne En-Ganim, nkurotoɔ ɛnan a wɔn adidibea ka ho.
30Aser abusuakuo no maa
Misal, Abdon, 31Helkat ne Rehob, a ɛyɛ nkurotoɔ ɛnan a wɔn adidibea ka ho.
32Naftali abusuakuo no maa wɔn
Kedes a ɛwɔ Galilea (dwanekɔbea kuropɔn), Hamot-Dor ne Kartan nkuro mmiɛnsa ne wɔn adidibea.
33Enti, nkuro dumiɛnsa ne ɛho adidibea na wɔde maa Gerson mmusua no.
34Lewifoɔ nkaeɛ a wɔyɛ Merari abusua no nso, wɔnyaa saa nkuro yi a
ɛfiri Sebulon abusuakuo nkyɛn:
Yokneam, Karta, 35Dimna ne Nahalal—nkurotoɔ ɛnan ne ɛho adidibea.
36Ruben abusuakuo no nso maa wɔn
Beser, Yahas, 37Kedemot ne Mefaat—nkurotoɔ ɛnan ne wɔn adidibea.
38Gad abusuakuo no maa wɔn
Ramot a ɛwɔ Gilead (dwanekɔbea kuropɔn), Mahanaim, 39Hesbon ne Yaser, nkurotoɔ ɛnan ne ho adidibea.
40Enti, nkurotoɔ dumienu na wɔde maa Merari abusua.
41Nkuro dodoɔ ne ɛho adidibea a na ɛwɔ Israelman mu a wɔde maa Lewifoɔ no nyinaa yɛ aduanan nwɔtwe. 42Na kuro biara wɔ adidibea da ho.
43Enti, Awurade de nsase a ɔkaa ho ntam sɛ ɔde bɛma wɔn agyanom no maa Israelfoɔ no, na wɔdii so nkonim, tenaa hɔ. 44Na Awurade ma wɔnyaa ahomeɛ wɔ afanan nyinaa, sɛdeɛ ɔhyɛɛ wɔn agyanom bɔ no. Wɔn atamfoɔ biara antumi annyina wɔn anim, ɛfiri sɛ, Awurade boaa wɔn ma wɔdii wɔn atamfoɔ so nkonim. 45Bɔhyɛ pa biara a Awurade hyɛɛ Israel no nyinaa baa mu.
ASCB : Yosua 21